निर्भया दोषीलाई फाँसी रोकियो , बुबा भन्छन - केजरीवालको कारण ढिलाइ भयो | Nepal Ghatana
निर्भया दोषीलाई फाँसी रोकियो , बुबा भन्छन – केजरीवालको कारण ढिलाइ भयो
प्रकाशित : १८ माघ २०७६, शनिबार ०८:०१
अदालतको अर्को आदेश नभएसम्म निर्भयाका दोषीलाई फांसी स्थगित गरिएको छ। निर्भयाका बुबाले दिल्लीको अरविन्द केजरीवाल सरकारलाई फाँसीमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाए। यद्यपि केजरीवालले निर्भयाका दोषीलाई फांसी स्थगित गरेकोमा दु:ख व्यक्त गरे।
निर्भयाका बुबा भन्छन कि मुख्य मन्त्री केजरीवाल महिलाको सुरक्षा लाई मुद्द बनाएर दिल्लीमा सत्तामा आए तर आज उसले निर्भयालाई न्याय नदिएर खेल खेले। जेल प्रशासन उनकै हातमा छ । उनि सोध्छन “घण्टौ सम्म न्यायाधीशसँग के कुरा गरे जसले एक मिनेटमा यो फांसी स्थगन गरियो ? यसका लागि केजरीवाल पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छन्।
निर्भयाका बुबा बद्रीनाथ सिंह यहीं रोकिएनन्, उनले भने कि दिल्लीका महिलाहरूले पनि बुझ्नु पर्छ कि दिल्लीमा बिजुली र पानी मात्र आवश्यक छ वा महिलाको सुरक्षा पनि आवश्यक छ। यदि दिल्ली सुरक्षित छैन भने, केवल अरविन्द केजरीवाल मात्र यसको लागि जिम्मेवार छन्।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल के भन्छन ?
यसैबीच, दिल्लीका मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवालले निर्भयाका दोषीका सजाय स्थगित गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले ट्वीट गरे, ‘मलाई दु:ख लागेको छ कि निर्भयाका अपराधीहरूले कानूनमा कम्जोरी भेट्टाए र मृत्युदण्ड लिनबाट जोगिए। तिनीहरूलाई तुरुन्तै फाँसी दिइनु पर्छ। हामीलाई हाम्रो कानूनमा संशोधन गर्न निकै जरुरी छ, ताकि बलात्कारका घटनाहरूमा छ महिना भित्र फाँसी दिना सकियोस्।